error - Synonyms of error | Antonyms of error | Definition of error | Example of error | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for error
Top 30 analogous words or synonyms for error
အင်တာနက် ဆင်ဆာပြုလုပ်ခြင်း အချို့ကိစ္စများတွင် အင်တာနက် ဆင်ဆာပြုလုပ်ခြင်းသည် လှည့်ဖြားမှု ပါဝင်နိုင်သည်။ ထိုသို့သော ဖြစ်ရပ်များတွင် ဆင်ဆာပြုလုပ်ခြင်း အာဏာပိုင်များသည် ပြည်သူအများကိုမူ ဆင်ဆာပြုလုပ်မှု မပြုလုပ်ပါကြောင်း ယုံကြည်စေရန် သွေးဆောင်လျက် ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကို ပိတ်ဆို့ထားနိုင်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန် “မတွေ့ပါ” ဆိုသည့် အမှားသတင်းပို့ချက် အတုကို ပေးသော ISP ကို ထားရှိနိုင်သည်။ တကယ်တန်းတွင်မူ တွေ့ရှိသော်လည်း ပိတ်ဆို့ထားခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ (အသေးစိတ်ကို ၄၀၄ အမှား(404 error) တွင် ကြည့်ရှုပါ။)
OSI မော်ဒယ်လ် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်မှုအလွှာသည် ဆက်ရှင်အလွှာမှ တည်ဆောင်ထားသော ကွန်နက်ရှင်ပေါ်သို့ ဒေတာများပို့ဆောင်ရန်တာဝန်ယူပါတသည်။ထို့အပြင် ဒေတာများ တိတိကျကျ စီးဆင်းမှုရှိစေရန် တာဝန်ယူပါသည်။ ထို့နောက် ဒေတာပက်ကတ် (Packets) များကို Datagram သို့မဟုတ် Segment များအဖြစ် ခွဲထုတ်လိုက်ပါသည်။ ထို ဒေတာများကို မပို့လွှတ်မီ ဒေတာလက်ခံမည့်သူ၏ လိပ်စာ ၊ တန်းစီနံပါတ်၊ ဒေတာများ အမှားပြုပြင်ရန်(Error Recover) နံပါတ်များ ဖြစ်သော Frame Check Sequence စသည့် တန်းစီ နံပါတ်များ တပ်ပေးလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်မှုအလွှာ မှ ပေးပို့လိုက်သော ဒေတာ Segment သို့မဟုတ် Datagram များသည် လမ်းတွင် ပျက်စီးပျောက်ဆုံးခဲ့ပါက ထို တန်းစီနံပါတ်များဖြင့် ပျောက်ဆုံးသွားသော ဒေတာများကို ထပ်မံပို့ဆောင်စေသည်။အချက်အလက်များ လုံခြုံရေးနှင့် အရေးကြီးသည်များကို ဦးစားပေးခြင်း စသည်တို့ကိုလည်း စီမံခန့်ခွဲပေးသည်။ ဖိုင်းယားဝေါ ပစ္စည်များနှင့် layer4switch များသည် ဤအလွှာတွင် အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဤအလွှာမှ ကြီးမားသော မက်ဆေ့များကို ပက်ကက် အသေးများအဖြစ် ခွဲခြမ်းပြီး ကွန်ယက် အလွှာမှ လှည့်ပတ် ပို့ဆောင်ရာတွင် အသင့်ဖြစ်စေရန် လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ TCP နှင့် UDP အစရှိသော ပရိုတိုကောလ်များသည် ဤအလွှာတွင် အလုပ်လုပ်ကြသည်။
အပိုလို ၁၁ Inaletter to Datamation, March 1, 1971, Margaret H. Hamilton, Director of Apollo Flight Computer Programming MIT Draper Laboratory, Cambridge, Massachusetts, stated: “Due to an error in the checklist manual, the rendezvous radar switch was placed in the wrong position. This caused it to send erroneous signals to the computer. The result was that the computer was being asked to perform all of its normal functions for landing while receiving an extra load of spurious data which used up 15% of its time. The computer (or rather the software in it) was smart enough to recognize that it was being asked to perform more tasks than it should be performing. It then sent out an alarm, which meant to the astronaut, I'm overloaded with more tasks than I should be doing at this time and I'm going to keep only the more important tasks; i.e., the ones needed for landing...Actually, the computer was programmed to do more than recognize error conditions. A complete set of recovery programs was incorporated into the software. The software's action, in this case, was to eliminate lower priority tasks and re-establish the more important ones...If the computer hadn't recognized this problem and taken recovery action, I doubt if Apollo 11 would have been the successful moon landing it was”.[a]